कांग्रेस र जसपा बैंठकः तत्काल संसद अभिवेशन बोलाउन माग - Limbuwan khabar
कांग्रेस र जसपा बैंठकः तत्काल संसद अभिवेशन बोलाउन माग
शनिबार, ०४ पुष, २०७७ साँझको ०७:११ बजे, लिम्बुवान न्युज
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो राष्ट्रिय दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संघीय संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा शनिबार दुई दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको छ । दुईलका नेताहरुको छलफलले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो ।
गत बुधबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गर्दै जसपा लगायतका साना दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेसको यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै शनिबार छलफल भएको हो । सो भेलमा कांग्रेसबाट देउवासँगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र डा. मिनेन्द्र रिजाल थिए भने जसपाबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो सहभागी भएका थिए ।
अहिलेलाई संसदमा समन्वय गर्दै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन समेत दुबै दलका शीर्ष नेताहरु सहमत भएका छन् । हामी बिच ‘कतिपय मुद्दामा मत फरक–फरक होला, तर समन्वयत्मक ढंगले काम गर्दै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत भएका छौं’ कांग्रेस नेता डा. रिजालले भनेका छन् ।